हामीमध्ये हरेक शौकहरू वा चासोहरू छन्, किनकि जन्ममा व्यक्तिले केहि चीज, विशिष्ट गतिविधिहरू, आदिमा निश्चित भविष्यवाणी गरेको छ। भलेपनि यो तपाईंलाई लाग्छ कि केहि पनि लाग्न सक्छ, तपाई गहिरो गलत हुनुहुन्छ। प्रायः सम्भव छ कि अहिलेसम्म एक साँच्चिकै रमाइलो पाठ भेट्न सकेन, त्यसैले हामी पत्ता लगाउन खोज्छौं कि एक शौक चाहिन्छ।
किन मानिसको शौक?
प्रसिद्ध लेखक र आंशिक रूपमा फिलोफेरो फ्रेडरिक बेबेबर्डको अनुसार, सबैलाई मात्र एक शौक चाहिन्छ। हालैका अध्ययनका अनुसार, सीआईएस देशका अधिकांश बासिन्दाहरूले यो सबैसँग छैनन्, तथापि, मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि सबैको जीवनमा मनपर्ने व्यवसायको एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आखिर, उनीहरूले हाम्रो जीवन अझ बढ्दो बनाउछ, सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
यसबाहेक, शौकहरू न्यूरोप्सिचि विकारहरूको रोकथाममा योगदान दिन्छन्। तिनीहरू कामसँग सम्बन्धित हुनुपर्दैन, तर पुन: सुरूमा तपाईंको शौकको उल्लेख तपाईंलाई मूल र रचनात्मक व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम छ।
मनोविज्ञान मा, यो मानिन्छ कि एक व्यक्ति को संतुष्ट गर्न को लागी पांच महत्वपूर्ण घटकों को स्थापना को आवश्यक छ: स्वास्थ्य, पसंदीदा व्यवसाय, विकास, सम्बन्ध र मुद्रा। एक कुरामा लुट नगर्नुहोस्। यदि तपाईं थप पैसा कमाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउन सबै स्वतन्त्र समय बिताउनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रियजनहरूका साथ तपाईंको सम्बन्धलाई बर्बाद गर्ने जोखिम खतरा गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूको खातिर मात्र बाँच्नुहोस्? भविष्यमा तपाई निराशाबाट हटाइने छ, किनभने च्याटहरू सधैं आफ्नो मूल घेरा छोड्छ।
यदि सबै उल्लेखित घटक समान रूपमा विकसित भएमा, बधाई छ, तपाईं एक सुखद व्यक्ति हुनुहुन्छ।
यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि काममा वा व्यक्तिगत जीवनमा असफलता प्रायः शौकहरूले क्षतिपूर्ति गर्दछ। उत्तरार्द्ध जीवन अझ धनी र रोचक बनाउन, थप विकासको लागि प्रेरणादायक र नयाँ आनन्दको खोजी खोजी।
कसरी सही शौक छान्नु हुन्छ?
प्रायः प्राय: तपाईं निम्न तस्वीर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ: एक व्यक्ति आफ्नो परिवारलाई खाना बनाउन लगातार पैसा कमाउन बाध्य हुन्छ, र उहाँसँग मात्र आफैले समय छैन। तर हामीमध्ये हरेकले प्राकृतिक प्रतिभा र क्षमताहरू छन् जुन उनीहरूको प्रमाणीकरणको लागि पर्खछन्। जीवन जीवन घटनाहरूको maelstrom मा, हामी तिनीहरूका बारेमा सोच्दैनौं।
तपाईंले आफैंको लागि उत्तम संसारलाई प्रदान गर्ने सबै भन्दा राम्रो शौक छनौट गर्नु पर्छ। यदि तपाईंले स्पष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्न चाहानुहुन्छ, ब्रह्माले तपाईंलाई यस्तो मौका प्रदान गर्नेछ। अधिकांश व्यक्तिहरूको शौकमा सबैभन्दा फैशनेबल व्यवसाय वा फोकस छनौट नगर्नुहोस्।
कुन कुराले तपाईको हृदयलाई छिटो हराउँछ र आत्मालाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यो सम्भव छ कि यो आन्तरिक व्यवस्था हुन सक्छ, पियानो बजिरहेको छ, एकै समयमा धेरै भाषाहरू सिक्न, यात्रा, आदि।
यो नोट गर्न अति उत्तम हुनेछैन कि व्यवसायको रूपमा शौक आत्म-प्राप्ति र कमाईको उत्कृष्ट तरीका हो। यदि तपाईं गम्भीर कुरामा केहि चासो लिइरहनुभएको छ भने, त्यसकारण तपाईले मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न वा प्रोग्रामहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी, तपाईं पैसा कमाउनुहुनेछ, र एकैचोटि आफ्नो सम्भावनाको अनुभव गर्नुहोस्। यो पथ तपाईको आफ्नै प्रतिभाहरू प्रकट गर्ने सबैभन्दा विश्वासी हो, त्यसैले तपाई साँच्चै के गर्न चाहानुहुन्छ सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस्।
शौकको स्वभाव कसरी परिभाषित गर्ने?
एक व्यक्तिको बारेमा आफ्नो रुचाउँदा धेरै भन्न सक्छ:
नियमको रूपमा, सक्रिय र भावनात्मक व्यक्तिहरूको चासो तिनीहरूलाई प्रायः खेलहरू वा सामान्य गतिविधिहरूमा सम्बन्धित क्रियाकलापको लागि सिर्जना गर्दछ। यो सामान्यतया स्पष्ट वर्णन गरिएको छ - उनीहरूलाई आफ्नो ऊर्जा राख्ने ठाउँ चाहिन्छ। तिनीहरू पार्टीहरू व्यवस्थित गर्छन्, नृत्य वा चरम खेलहरूमा संलग्न हुन्छन्।
ईगोस्सेन्सहरूले निम्न शौकहरूमा देखाउँछन्: तिनीहरू फैशनेबल चीजहरू सङ्कलन गर्न मनपर्छ, ती ठाउँहरूमा जहाँ तिनीहरूले मान्यता प्राप्त गर्न सक्छन्।
Pedantic र neat people मा तपाइँ पुरानो सिक्का, टिकटहरू, पोष्टकार्डहरू वा पोष्टकार्डहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, ऐतिहासिक चीजहरू, आदि
क्रिएटिव प्रकृति आफैले रोचक शिल्पको निर्माणमा प्रकट गर्दछ।
तर, दुर्भाग्यवश, अधिकांश मानिसहरू आफ्नो समय सोशल नेटवर्कमा बिताउँछन्, टिभी हेर्दै वा फोनमा मान्छेसँग कुरा गर्दै। तिनीहरूले शौकहरूको महत्त्वलाई कम गर्छ।
अन्ततः यो उल्लेखनीय छ कि, मनोवैज्ञानिहरु को अनुसार, जो शौक छ वा एक प्यार गरिएको एक सम्पूर्ण जिन्दगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो क्यारियरमा अधिक सफल हुन्छन्। केहि सफलता हासिल गरे पछि, उनि रैंक्स को माध्यम ले बढ्दो विकास मा एक शौक को प्रोजेक्ट गर्दछ। तिनीहरू आफैमा अझ विश्वस्त छन् र उनीहरूको डरले सजिलै संगै निस्कन्छन्, जुन प्रेमको हाकिमको समयमा खुशीको हार्मोनको रगतमा रिहाएर व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तपाइँको क्यारेक्टर कसरी परिवर्तन गर्ने?
खराब बानीहरूको त्याग
महिलाहरु को लागि मनोविज्ञान मा किताबहरु
मनोविज्ञान र न्यूरोसहरू
मंच र सार्वजनिक उपस्थितिको डर कसरी हटाउन?
बुटवलहरू हटाइँदैछन् - मैले के गर्नु पर्छ?
बेवकूफ महिलाको मुख्य संकेत
सुविधा मा शैक्षणिक र मनोविज्ञान - सिद्धान्तहरु र नियमहरु
मनोविज्ञान - लक्षण र साइन्स
कुकुर र भाषा
स्टकहोम सिंड्रोम - यो के हो?
पहिलो र सेकेन्ड सिग्नल प्रणाली
डच चयनको कर्कर
कालो चोकरी र चेरी पातहरु को लिकर
मन्दिरको छोटो चोमी
के म सोडा संग वजन गुमाउन सक्छु?
अनुहारमा रंगीन स्पटहरू कसरी हटाउन सकिन्छ?
आफ्नै हातले खेल मैदान
समर युवा पोशाक
मल्टीवार्कमा मटर शुद्ध
खट्टा क्रीममा चिकन
कोट ट्रांसफार्मर को छाती को छाती संग
एक द्रुतक कुकरमा चिसो - छुट्टी र नाकको लागि सरल र द्रुत व्यञ्जनहरू
के जेनिफर गार्नरसँग एक नयाँ रोमान्स छ?
स्टीव जगतहरूको मृत्युको कारण
नवजातको लागि धुलाई पाउडर
बच्चाहरूको लागि फर्नीचर